Ezypta: Nandà ny hihaona amin’ny filoha Bush i Wael Abbas · Global Voices teny Malagasy
Ezypta: Nandà ny hihaona amin'ny filoha Bush i Wael Abbas
Voadika ny 05 Desambra 2008 10:00 GMT
Nilaza tao amin'ny bolongany ny mpamahana ezypsiana iray Wael Abbas izay mpikatroka ihany koa fa nolaviny ny hihaona amin'ny filoha Bush.
Izao ary ny nosoratan'i Abbas:
Naharay antso avy amin'ny mpiasa ambony ao amin'ny masoivoho amerikana aho omaly nanasa ahy hihaona amin'ny filoha Bush – eny, mbola izy tokoa aloha no filoha mandra-pametraka amin'ny fomba ofisialy an'Atoa Obama. Amin'ny fo tsotra no ilazako fa gaga aho saingy tsaroako ny fa efa nihaona tamina mpamaham-bolongana Irakiana koa i Bush. Mety hoe nahaliana azy ny hihaona amin'ny mpamaham-bolongana Irakiana noho ny fanafihana any Iràka saingy nahoana kosa moa izy no hitady fihaonana amiko? Raha toa moa mifandraika amin'ny maha-mpanao gazety ahy sy amin'ny maha-mpamaham-bolongana ahy no iresahany amiko mba hanontaniako zavatra maro aminy dia milamina avy eo tsy ho heninkaja mihitsy ny hihaonana aminy. Inona moa no ilako fihaonana aminy?Tsy filohako na raiko akory i Bush; Tsy izy koa no mpiambina ara-dalàna an'izao tontolo izao araka ny eritreretiny. Tsy mba mariky ny zavatra iray maha-te-hidera i Bush ka hanome voninahitra ny olona rehetra mihaona aminy; Hanimba ny laza tsaran'ny olona marina iray ny fihaonana amin'i Bush – tsy hisy ahazoana rehareha avy amin'izany. Tsy nitrosa tamin'i Bush aho ary tsy manan-trosa aminy ihany koa ary raha misy aza ny zavatra mety ilaiko avy aminy, dia tsy mila izany intsony aho. Manohitra amin'ny heriko manontolo ny fitsabahan'ny Amerikana amin'ny raharaha an-tokatranon'i Ezypta aho na na hitondra zava-tsoa izany na hitondra voka-dratsy. Ny hany tadiaviko aminy dia ny hitandroany ny fandriampahalemany sy ny hampiatoany ny fanohanany ny fitondrana Ezypsiana. Aleo tsy resahina ny fananihana an'Iràka sy ny voina rehetra nentiny manerana izao tontolo izao, fa efa mihoatra ny zaka kosa ny iantsoan'i Bush ny filoha Mubarak ho “olon'ny fandriampahalemana”.
Tsy noho ny tahotry ny ho voatsikera no andavako ny fanasany ka hiaina hanambaka (hisongona?) ny antoko politika sasany satria afaka manambara amim-pilaminana isika fa tsy manana fifandraisana akaiky na amin'ny antoko iza na antoko iza eto Ezypta. Fa tsotra ny antony tsy mahaliana ahy hiresaka amin'olona tahaka an'i Bush – tsy tahaka an'i Nelson Mandela na i Gandhi na ny Mera Teresa izy – handry am-piadanana anie ny Mera.
Raha toa moa izy ity fanasana avy amin'i Obama – tsy misy ompa izany – dia ho nanaiky tamim-pifaliana tokoa aho. Farafaharatsiny mba nahazo fahafinaretana hihaona amin'ilay olona mialoha ny handraisany ny asany izay handoto ny tanany. Ankehitriny dia tia azy ny olona ary tiako ny hihaona aminy raha mbola tia azy ny olona. Mety ho heninkaja amin'ny fihaonana amina olomangan'ny fiovana amin'ny tantara Amerikana aho. Izany no ohatry ny filoha tena nofidiana tamin'ny fomba demaokratika. Izany no ohatry ny zavatra tianay ho hita manerana izao tontolo izao, manomboka eto Ezypta izany. Mety ho sahisahy loatra aza aho miteny hoe ny fandresen'i Obama indray no mari-pamantarana vaovao taorian'ny hetsika nataon'ny Amerikana Afrikana nitaky ny zony miaraka amin'ireo mpitarika azy – izay tononina anarana hoe Martin Luther King sy Malcolm X. fa mba iza moa ity Bush ity ary inona no ahafantarana azy na isoloany tena? Miasa ho amin'ny fahafahana politika eo amin'ny tsirairay aho ary manohitra ny tsindrihazolena, ny herisetra, ary ny jadona koa amin'ny lafiny manao ahoana amin'ny tolona ataoko moa no ilako an'i Bush?
Mahafantatra ny ekipa teo aloha fa kely sisa ny fotoana iasany ka nanapa-kevitra izy ireo hanasaritaka kely mialoha ny ialany. Nanapa-kevitra izy ireo ny hanome voninahitra mpikatroka vitsivitsy nefa ny tena marina dia manilika azy ireo i Amerika. Te-hahazo tombony eo amin'ny tsy fitovian-kevitra sy ny fahombiazana azony izy ireo mandra-pahatongan'ny faha-15 minitra mampitsahaketrika ny lazan'izy ireo. Tiako ny Amerikana amin'ny maha-olona azy sy isaky ny mitsidika an'i Amerika aho, satria manohana ahy sy ny hevitro ireo Amerikana ireo…. Mety hoe tsy i Amerika no vahaolana fakantahaka indrindra momba ny fahafahan-gazety sy fahafahan'ny antoko politika saingy mahaliana hatrany ny mandinika sy manadihady ny fiaraha-monim-pireneny.